China nkume ogwe aka & emepụta factory na ndị na-ebu ngwaahịa | Bonovo
Total Ogologo （mm) 8600 8800 9100 9500 9800
Ọganihu Ogologo （mm) 5600 5850 6100 6300 6500
Ogwe aka Ogologo （mm) 3300 3400 3500 3750 3950
Ibu ibu （ton) 14 16 18 20 20
Ngwugwu Elu （mm) 3420 3420 3440 3620 3850
Shortened oké ọrụ rock ọganihu ogwe aka na ike Igwu Ala ike ọtụtụ-eji na Ngwuputa, ụzọ mwube, ụlọ mwube, oyi kpọnwụrụ ala-ewu na ndị ọzọ na ụdị oru.It mfe imebi nnọọ ike ala na simenti n'ala. Efficient ịrụ ọrụ nke ọma karịa haịdrọlik hama nwere ike ịrụ ọrụ ọnọdụ akọwapụtara.
Ogologo nke ogwe aka ahụ dị mkpụmkpụ na ịdị arọ nke ogwe aka mụbara, na-agbanwe nha nke akụkụ elu na nke ala na nke fulcrum ọhụrụ na ike nke cylinder dị ike. Ihe niile n’eme ka ikike mmebi nke ihe anyị mepụtara puta ihe kariri nke kwesiri.
Nkà mmụta sayensị na ezi uche na-arụpụta usoro na teknụzụ na-arụpụta kwụsie ike abụghị naanị na-ebelata oge ọrụ kamakwa ọ na-ebelata ọnụ ahịa ọrụ nke ndị na-egwupụta akụ.
Xuzhou Bonovo bụ ọkachamara ụlọ ọrụ tụnyere ihe R&D, n'ichepụta na ahịa nke ewu ígwè Mgbakwụnye. Site na ndị ọrụ njedebe na ndị mmekọ OEM, ndị na-ere ahịa anyị, Bonovo wuru aha ọma maka ogo na ọrụ ndị ahịa. Anyị wuru siri ike imekọ ihe ọnụ na ụwa - ma ama ọtụtụ ụwa ma ama ika na-ere ahịa dị ka OEM na-akwado nhazi na nyere nkwado ọrụ maka anụ ụlọ na ndị mba ọzọ na-emepụta. Ihe mgbakwunye anyị maka ndị a na-emepụta maka ndị na-egwupụta ihe na ndị na-ebu ihe ka ha wee nwee ike ịchọta mkpa dị iche iche na nkà na ụzụ na-arụ ọrụ kachasị mma maka ụdị ọrụ ụwa niile.
Nke gara aga: Iku
Osote: Nkume RIPPER
smallrig ndọtị ogwe aka
ogwe aka telescopic
ogwe aka telescoping
tripod ndọtị ogwe aka